1.What bụ malware, ihe ụdị nsogbu ndị ha na ihe nwere ike ime, otú ha ga-esi na kọmputa gị
2.List dị iche iche nke malwares
3.How ka ihichapụ malwares site na kọmputa gị
4.Things ime mgbe ihichapụ malwares
Part 1 Gịnị bụ malware, ihe ụdị nsogbu ndị ha na ihe nwere ike ime, otú ha ga-esi na kọmputa gị
Malware bụ a obi koodu na infiltrates a kọmputa ọbụna na-enweghị nkwenye ma ọ bụ ihe ọmụma nke Windows ọrụ. N'ezie site na okwu "obi" ọ na-abịa na "mal-ike" okwu na e nwere ndị a otutu malware ụdị dị ka nje, trojans, na ikpuru, spyware na ike na-ezu ohi mwute data. E nwere maara nke ọma ụzọ otú malware-na kọmputa gị dị ka mmeghe ọjọọ ebughị ihe ọjọọ n'obi Mgbakwụnye si gị email, nbudata ụfọdụ faịlụ site na untrusted online isi mmalite, na-eleta-enyo anyị enyo weebụsaịtị. Ụbọchị anyị, e nwere ọtụtụ ọma e dere malwares ka ha nwere ike ọgụ na-agabiga gị antivirus, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-emelitere.
Part 2 D ifferent ụdị nke malwares
Dị iche iche nke malware na-kere n'ihi uru site na iji na-amanye mgbasa ozi mara dị ka adware, n'ihi na ewere nzuzo mwute data - spyware, maka ịgbasa email ojoro, n'ihi ego ịpụnara mmadụ dị ka ransomware. Na ọtụtụ malwares ẹdude, ha na-grouped nọ ezinụlọ nke malware. Ka ihe atụ, Zuten bụ ezinụlọ malware na steals data si online egwuregwu, ma ọ bụ FakeScanti na a bụ rogue-azọrọ na ha ike iṅomi maka malware, na ọbụna na-egosi adịgboroja ịdọ aka ná ntị na "obi na programmụ na nje". E nwere ọtụtụ aha maka FakeScanti, dị ka AKM Antivirus, ProAV Nche Online, Windows Antivirus Pro, Your PC Nchebe na ndị ọzọ na aha na aka a otutu anya. Adịghị adabere amaghị "antiviruses" na sofisticated aha. One ezi echiche bụ ego na-enye site Windows website ma ọ bụ site ikike weebụsaịtị.
Ọzọ malware ezinụlọ bụ Netsky, a uka-nzipu ozi ikpuru ahụ na zaa Windows kọmputa na infects ha. The echiche bụ isi bụ na, mgbe otu Onye ọrụ ga-emepe ihe e-mail mgbakwunye na e dere a Netsky, irighiri na-arụ ọrụ ma na-emerụ kọmputa, ọbụna netwọk na kọmputa.
Iji na-pụọ malware na kọmputa gị, ị ga-eme mgbe nile mmelite maka gị sistemụ, n'ihi na gị antivirus, na nke ọ bụla ezi software na ojiji.
Nkebi nke 3 Olee otú ka ihichapụ malwares site na kọmputa gị
Ịlele ma, ọ bụrụ na ọ bụ ikpe, nhichapụ nke malwares, ga na-a mgbe edinam maka ihe ọ bụla Windows ọrụ. N'ezie, n'ihi na ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla sistemụ.
Otu free ngwá ọrụ maka ịlele na wepụ malwares bụ Microsoft Obi Software iwepụ Ngwá Ọrụ. Ọ free, mfe ibudata ma wụnye na kọmputa gị. Ọ ga-eji na kọmputa na Windows 7, 8, 8.1, na ọbụna 10. Ọzọkwa, ndị okenye na nsụgharị dị ka Vista ma ọ bụ XP na-akwado.
Soro nzọụkwụ n'okpuru iji eji Microsoft Obi Software iwepụ Ngwá Ọrụ:
1. Gaa Microsoft website na ibudata na ngwá ọrụ
2. Wụnye ngwá ọrụ
Dị nnọọ eso ọkachamara nzọụkwụ. The mfe ụzọ nke mbụ na ojiji bụ dị nnọọ ka pịa "Ekem" na ngwá ọrụ ga ego maka malware site na-eme a Quick iṅomi. Ọ bụrụ na ọ bụ ikpe, ị ga--amara gị ọkwa na na-atụ aro a miri search.
3. Scaning na nhichapụ nke malware
The ịba uru na-agba na ndabere n'oge atule nke malware. Oge maka ịlele nje faịlụ na-dabere na ọnụ ọgụgụ na size nke gị faịlụ. Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na-eche dị ka ogologo oge ọ na-kwesịrị n'ihi na nke a bụ ihe dị nnọọ mkpa edinam n'ihi na gị si na kọmputa nchekwa na nche. Mgbe mmezu nke ya arụmọrụ, ị ga-enweta otu akụkọ na malwares achọpụtara na-ewepụ.
Akọ mgbe Doppler:
Nkebi nke 4 ihe na-eme mgbe ihichapụ malwares
agbakwunye nchebe gị na kọmputa na malwares
Ọrụ gị na-erubeghị okokụre iji na-kọmputa si nche on a elu larịị. Mgbe scanning na nhichapụ nke malware, imelite gị sistemụ arụmọrụ na gị antivirus. Na ikpe ị na-adịghị ihe antivirus arụnyere, ugbu a ọ bụ oge iji a ezi antivirus na kọmputa gị.
ike iṅomi n'ihi na o kwere omume data ọnwụ ruru ka malwares na-agbake furu efu faịlụ (na wondershare data mgbake)
Tinyere nhichapụ nke malwares, o nwere ike na-abịa ụfọdụ nsogbu Ọzọkwa, dị ka data ọnwụ. Iji jide n'aka na gị na kọmputa bụ na ezi ala, na-eme a Doppler maka na o kwere omume data ọnwụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ikpe, Wondershare Data Recovery ga-agbake furu efu faịlụ mgbe n'ịrụ iṅomi.
> Resource> ihichapu> Nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu ka ihichapụ malwares / nje na kọmputa gị